Tan iyo bilowgii dhibaatada caafimaad, codsiyada joojinta shaqada ayaa qarxay. Kordhin taas oo lagu sharaxay balaadhinta xaaladaha arinta. Shan iyo toban maalmood gudahood, in ka badan hal milyan ayaa loo qoray laakiin xanuun dartiis looma qorin, sida laga soo xigtay Sanduuqa Caymiska Caafimaadka Qaranka (Cnam). Codsiyada waxay ka imanayaan waaliddiinta ay tahay inay daryeelaan carruurtooda sababtoo ah xirnaanshaha iskuulada, dadka caafimaadka jilicsan ee ay tahay inay is karantiimeeyaan, haweenka uurka leh ee gaara seddaxda bilood ee uurka.
Si loo fududeeyo ka shaqeynta codsiyada, Caymiska Caafimaadka ayaa furi doona cinwaan email u heellan maaraynta joojinta shaqada waraaqaha taas oo ka dhigaysa suurtogalnimada in la gudbiyo dhammaan dukumintiyada taageeraya, la bartay Capital. Adeeggu waa inuu diyaar ahaadaa waddanka oo dhan dhammaadka usbuuca. Caymiska waxaa si toos ah ugu wargalin doona sanduuqooda. Feejignaan, asalka sifiican u ilaali: Caymiska Caafimaadka ayaa laga yaabaa inuu u baahdo soo bandhigiddooda haddii ay dhacdo kormeer.
Gaabi waqtiyada howsha
Xilligan, waxaad ku dalban kartaa fasax jirro khadka tooska ah adoo adeegsanaya taleefanka cadee.ameli.fr (Nidaam u gaar ah waalidiinta ay tahay inay daryeelaan carruurtooda iyo dadka halista ku jira)
Fasaxa jirada ee la fududeeyay: waxaad ku soo diri kartaa dukumiintiyada taageeraya emayl July 10th, 2021Tranquillus
READ U wareejinta xuquuqda shaqsi ee tababarka koontada tababarka shaqsiga: ugu dambayn Juun 30, 2021